Akụkọ banyere Rome, site na ntọala ya ruo mgbe ochie | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | omenala, Rome
Akụkọ mgbe ochie nke Rome nwere mgbọrọgwụ na mmalite nke Obodo Ebighebi. Dị ka ị maara, ntọala nke ya nwere akụkọ ifo n'azu ya, nke Romulus na Remus. Mana, na mgbakwunye, obodo nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme ga-edokọ ọtụtụ akụkọ akụkọ ifo ndị ọzọ ị ga-atọ ụtọ ịmata.
Anyị agaghị enwe ike ịgwa gị ha niile, mana anyị nwere ike ijide gị na akụkọ ndị anyị ga-agwa gị bụ akụkụ nke akụkọ akụkọ kachasị oke ọnụ ahịa Rome na ị ga-enwe ọ enjoyụ ịmara ha. Ọ bụghị n'efu ka ha nwere akụkọ metụtara mbụ eze, na ndị eze ukwu site n'oge ochie na oge gbara ọchịchịrị Etiti oge gboo nke mara mma Italian obodo (ebe a ka anyị na-ahapụ gị otu isiokwu banyere ihe ncheta ya). Ma, na-enweghị n'ihu ado, ka na-aga na nke kacha mma akụkọ ifo banyere Ebighebi City.
1 Akụkọ ifo nke Rome, kemgbe ntọala obodo ahụ
1.1 Akụkọ banyere ntọala nke Rome
1.2 Mmeko nwoke nke ụmụ nwanyị Sabine, akụkọ ndị ọzọ a ma ama na Roman
1.3 Egwu nke Mazzamurelli
1.4 Castel Sant'Angelo, ihe ngosi nke ọtụtụ akụkọ ifo nke Rome
1.6 Agwaetiti Tiber
Akụkọ ifo nke Rome, kemgbe ntọala obodo ahụ
Dị ka anyị gwara gị, mmalite nke Rome nwere akụkọ ifo. Ma, otú ahụ ka ndị a ma ama na nwunye nke Ohi nke ndi sabines, ekele nke oge ochie obodo Rom toro n'abalị. Ka anyị jiri ya gaa.
Akụkọ banyere ntọala nke Rome
Romulus na Remus bụ ndị anụ ọhịa wolf na-amịrị
Akụkọ ifo nke Rome malitere na narị afọ nke asatọ BC. Otú ọ dị, akụkọ akụkọ Rom a malitere ọbụna n'oge gara aga. Ascanius, nwa nke Aeneas, ndị Trojan dike, tọrọ ntọala na bịara n'ikperé mmiri nke Tiber obodo Alba Longa.
Mgbe ọtụtụ afọ gachara, a kpọrọ eze obodo a Nọmba Na nwanne ya Amulium na-ehichapụ ya. Ma nnukwu mpụ ya akwụsịghị ebe ahụ. Nke mere na onye nke mbụ agaghị enwe mkpụrụ ga-azọrọ ocheeze, ọ manyere nwa ya nwanyị, Aha ya bụ Silvia, ịbụ Vestal, nke chọrọ ka ọ nọgide na-amaghị nwoke. Otú ọ dị, Amulio ọjọọ ahụ echebaraghị uche nke chi ahụ echiche Mars.
Onye a tụrụ ime Rea n’aka ụmụ ejima ahụ Romulus na Remus. Otú ọ dị, mgbe a mụrụ ha, n'ihi ụjọ na ajọ eze ahụ ga-egbu ha, etinye ha n'ime nkata ma hapụ ha n'Osimiri Tiber n'onwe ya. Nkata ahu dakwasiri ya nso n’ebe oke osimiri no, n’ugwu asaa, ebe a huru ya a wolf. O zoputara ma lekọta umu ya n'ogige nke Jehova Ugwu Palatine rue mgbe onye ọzụzụ atụrụ chọtara ha, onye kpọgara ha n'ụlọ ya, ebe nwunye ya zụlitere ha.
Dị ka ndị okenye, ụmụ okorobịa abụọ ahụ napụrụ Amulio ocheeze ma dochie Numitor. Mana ihe kachasị anyị mkpa maka akụkọ ihe mere eme anyị bụ na Romulus na Remus guzobekwara ógbè Alba Longa n'akụkụ osimiri ahụ n'onwe ya, kpomkwem ebe nkịta-ọhịa wụrụ ha, na ndị ndu ha kpọsara.
Otú ọ dị, arụmụka banyere kpọmkwem ebe a ga-emepụta obodo ọhụrụ ahụ dugara n'ọgba aghara dị egwu n'etiti ndị abụọ ga-ejedebe Wepu ọnwụ n'aka nwanne ya. Dabere na akụkọ mgbe ochie, Romulus ghọrọ mbụ eze ndu Rom. Ọ bụrụ na anyị ga-elebara ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke oge ochie anya, ọ bụ afọ 754 BC.
Mmeko nwoke nke ụmụ nwanyị Sabine, akụkọ ndị ọzọ a ma ama na Roman
Mmeko nwoke nke umuaka Sabine
Nakwa na oge Romulus bụ akụkọ banyere mgbatị nke ụmụ nwanyị Sabine, akụkọ akụkọ ọzọ a ma ama nke ndị Rom. Ekwuru na onye guzobere obodo ahụ nabatara onye ọ bụla si Lazio dị ka nwa amaala ọhụrụ iji mejupụta ya.
Agbanyeghị, ha niile bụ mmadụ niile, nke mere ka uto Rome ghara ikwe omume. Mgbe ahụ Romulus chọpụtara ụmụ nwanyị nke sabine, onye bi n’ugwu dị nso nke Quirinal o wee gawa ịtọrọ ha.
Iji mee nke a, ọ kpọrọ nnukwu oriri ma kpọọ ndị agbata obi ya. Mgbe mmanya na-eju ndị Sabine afọ zuru ezu, ọ tọọrọ ụmụ ha nwanyị wee kpọrọ ha gaa Rome. Ma akụkọ ahụ akwụsịghị n'ebe ahụ.
Ka ọ dịgodị, ọ hapụwo inye iwu nke obodo Tarpeia, onye hụrụ Eze Latinos n'anya. Dika ha kwuputara agha na Rome mgbe ndi mmadu nwudoro, nwatakiri ahu nwoke na eze eze gbara oso na ya ga egosi ya uzo nzuzo n’obodo ma oburu inye ya ihe o nwere n’aka aka ekpe. Ọ na-ezo aka na mgbaaka ọla edo, mana, mgbe ndị Sabines mara na ụzọ zoro ezo na Rome, eze nyere ndị agha ya iwu ka ha jiri ọta ha kpochapụ Tarpeii, buru ibu na aka ekpe ya.
Otú ọ dị, njedebe nke akụkọ a nwere ihe ọzọ dị iche. Ọ na-ekwu na ndị Rom, n'ihi na ha matara ịrara nwa agbọghọ ahụ nye, tụpụrụ ya n'elu ugwu nke akpọrọ kemgbe ahụ Okpokoro Tarpeya.
N'ikpeazụ, esemokwu dị n'etiti ndị Sabine na ndị Rom. Ma ọ bụ kama, ọ bụghị n'ihi na ụmụ agbọghọ ahụ a tọọrọ guzoro n’etiti ndị agha abụọ ahụ ịkwụsị ọgụ ahụ. Ọ bụrụ na ndị Rom merie, ha ga-efunahụ nne na nna ha na ụmụnne ha, ma ọ bụrụ na Sabines mere, ha ga-ahapụ ndị di. N'ihi ya, e mere udo n'etiti obodo abụọ ahụ.
Egwu nke Mazzamurelli
Street Mazzamurelli, ọnọdụ nke akụkọ mgbe ochie Rome ọzọ
Ọ bụrụ na ị gaa na Na-agbasi ike Roman, ị ga-ahụ a obere n'okporo ámá na, na-amalite site chọọchị nke St. Chrysogonus, rutere elu nke San Gallicano. Nke a uzo warawara bu nke ndị Mazamurelli. Ma ndị bụ ndị ae kere eke na ọbụna nwere a n'okporo ámá ke Rome aha ha?
Anyị nwere ike ịchọpụta ha na ụmụaka ndị ahụ anụ ntị ọgụgụ isi nke ahụ bụ akụkụ nke akụkọ ifo nile nke ụwa. Ha ga - abụ ụdị elves na - enwe obi ụtọ ịme obere aghụghọ na ndị na - agafe na, n'ezie, ndị bi n'okporo ámá ahụ.
N’ezie, otu n’ime akụkọ ndị a kọrọ n’akụkọ ifo a na-ekwu na e nwere nwoke a ma ama dị ka onye majik na-ahụ ihe ndị Chineke kere eke. Ulo nke onye a ka echekwara n'uzo a na-ekwu anọgidewokwa na-anyụ.
Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile dị njọ na gburugburu mazzamurelli. Maka ndị ọzọ na-akọ akụkọ akụkọ a banyere Rome, ha bụ ndị e kere eke bara uru bụ ndị raara onwe ha nye ichebe ndị agbata obi nke n'okporo ámá na-aza aha ha.
Castel Sant'Angelo, ihe ngosi nke ọtụtụ akụkọ ifo nke Rome
Na mgbakwunye na otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa nke Obodo Ebighị Ebi, Castel Sant'Angelo nwere ọtụtụ akụkọ. Wuru ka na- Mausoleum nke Emperor Hadrian, nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ abụọ nke akụkọ ntolite. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na ọ bụ ebe a na-akọ ọtụtụ akụkọ akụkọ.
Onye kacha ewu ewu na ha bụ ihe kpatara aha ya. Anyị nọ n'afọ 590 nke oge anyị. Ọrịa na-ebibi ihe na-akpata mbibi dakwasịrị Rom na popu Gregory Onye Ukwu hazie ndi mmadu. Ka ọ na-erute nnukwu ụlọ ahụ, ọ pụtara n’elu ya onyeisi ndị mmụọ ozi na o ji mma agha n’aka ya ịkpọsa njedebe nke ọrịa ahụ.
Ya mere, obughi nani ulo uku ka a na-akpọ de Sant'Angelo, ma na mgbakwunye, ọnụ ọgụgụ nke onyeisi ndị mmụọ ozi wuru n'elu ya na, mgbe ọ gbasịrị ọtụtụ mweghachi, ị ka nwere ike ịhụ taa.
Passetto di Borgo, ihe nkiri ọzọ nke ọtụtụ akụkọ ifo nke Rome
Anyị agaghị ebe dị anya site na ụlọ gara aga iji chọpụta isi ihe ndị ọzọ nke Rom nke jupụtara na akụkọ na akụkọ ifo. N'ebe ọwụwa anyanwụ Passetto ma ọ bụ walled ụzọ enyekwara, kpomkwem, nnukwu ụlọ nke Sant'Angelo na Vatican.
Ọ dị obere ọkara maịl, mana ọ bụ ụdị ebe a na-eme ya leaked nduku na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ndị chọrọ izo n'oge agha na ịkwakọrọ ihe. Agbanyeghị, akụkọ a na-ekwu na onye ọ bụla gafere ya ugboro iri asaa ga-ahụ etu nsogbu ha niile si akwụsị.
N'ihi ya, akụkọ mgbe ochie bụ akụkọ banyere passetto di Borgo na ọ pụtara n'ọtụtụ fim, usoro telivishọn na ọbụna egwuregwu vidio.
Anyị gwụchara njem anyị banyere akụkọ ifo nke Rome na agwaetiti a, nke ị ka nwere ike ịhụ taa n'etiti Tiber. O nwere ọdịdị nke ụgbọ mmiri ma dịkwa obere mita 270 n’ogologo na mita 70 n’obosara. Agbanyeghị, ọ bụ isiokwu nke akụkọ ifo site na mgbe ochie.
N'ezie, ha na-emetụta ọdịdị nke ha. Ọ bụ kwuru na nke ikpeazụ eze Rome, Tarquinius the Superb, nke ụmụ amaala ibe ya tụbara n'ime osimiri ahụ. Ọ bụ nwoke rụrụ arụ nke zuru ọbụna ọka wit ha. N'oge na-adịghị anya mgbe ihe omume a gasịrị, agwaetiti ahụ malitere ịpụta na ndị Rom chere na ọ malitere n'ihi nsị a gbakọtara n'akụkụ ahụ eze ahụ, akụkụ dị mma n'ime ya bụ, ọka wit ahụ o zuuru.
Maka ihe a niile, Tiberina na-agha mkpụrụ mgbe niile egwu n’etiti ụmụ amaala Rome. Nke a were ọtụtụ narị afọ ruo mgbe, n'oge ọrịa na-efe efe, a agwo (akara nke ọgwụ) nke mechara ọrịa ahụ. Dị ka ịkele, ndị Rom wuru ụlọ nsọ maka nsọpụrụ nke Aesculapius n'àgwàetiti ahụ ma ha kwụsịrị ịtụ egwu ileta ya. Anyị na-echetara gị na ọnụ ọgụgụ a bụ kpọmkwem chi ọgwụ ndị Rome.
N’ikpeazụ, anyị gwara gị ụfọdụ ndị ama ama akụkọ ifo nke rome. Ka osi di, obodo ochie dika nke a aghaghi inwe otutu ndi ozo. N'ime ndị na-adịgide na pipeline na ikekwe anyị ga-agwa gị n'isiokwu ọzọ bụ nke na-ezo aka Emperor Nero na Basilica nke Santa Maria del Pueblo, Otu n'ime Dioscuri Castor na Pollux, nke Ọnụ nke Eziokwu ma ọ bụ ọtụtụ ndị nwere dị ka protagonist Hercules.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » Akụkọ banyere Rome